LMDE <° Linux | मा Synaptic भेटौं लिनक्सबाट
LMDE <° लिनक्समा Synaptic भेटौं
सुरु गर्ने प्रयोगकर्ताहरू बीच सबैभन्दा धेरै प्रश्नहरू मध्ये एक जीएनयू / लिनक्स, कसरी प्रोग्रामहरू स्थापना वा स्थापना रद्द गर्ने र कस्तो प्रकारको प्याकेजहरू स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने हो। हामी तपाईलाई यो कार्य गर्नका लागि सजिलो तरिकाहरू मध्ये एक देखाउने छौं सिपाप्टिकर साथै, हामी तपाईंलाई छोटो रूपमा बताउँदछौं कि यो के हो र हामी यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं।
सामान्य रूपमा Windows, एक्स्टेन्सनको साथ एक फाईल स्थापना गर्न .exe र हामीले केवल यो प्रयोग गर्नुपर्दछ अर्को »अर्को एक वा अर्को सिरियल नम्बरको साथ र रिभर्स प्रोसेसको लागि (स्थापना रद्द गर्नुहोस्), हामी जान्छौं नियन्त्रण प्यानेल »प्रोग्राम थप्नुहोस् / हटाउनुहोस्.
को मामला मा जीएनयू / लिनक्स, हामी यहाँ कल गर्न सक्ने केहि पनि छन् .exe तर पक्कै पनि तिनीहरूको अर्को नाम र संरचना छ। प्राय: प्याकेजहरू यसमा जीएनयू / लिनक्स तिनीहरू भण्डारहरूमा राखिन्छन्, र विभिन्न उपकरणहरू प्रबन्ध गर्न प्रयोग गरिन्छ। शायद सबै भन्दा लोकप्रिय वा ज्ञात हो .deb र .rpm र दुबै द्वारा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ सिपाप्टिक, जुन सुरुमा इन्टरफेस हो एपीटी.
संग काम सिपाप्टिक यो धेरै सरल छ। इन्टरफेस जटिल छैन र विरलै नयाँ प्रयोगकर्ताले यसको सबै विकल्पहरू प्रयोग गर्न वा परिमार्जन गर्नुपर्दछ। सामान्यतया, यो पूर्वनिर्धारित रूपमा आउँदा, सबै भन्दा साधारण कार्यहरू प्रदर्शन गर्न सकिन्छ।
सिपाप्टिक उसलाई जस्तै भएको छ प्रोग्राम थप्नुहोस् / हटाउनुहोस् de Windows। यसको अपरेशनका लागि, हामीले कन्फिगर गर्नुपर्दछ (को मामलामा Debian र यसका डेरिभेटिभहरू) भण्डारहरूको लागि मार्गहरू जहाँ फाईलमा स्थापना गर्न प्याकेजहरू अवस्थित छन् /etc/apt/sources.list। त्यो फाईलबाट, सिपाप्टिक प्याकेजहरू पहुँच गर्न आवश्यक मार्ग प्राप्त गर्दछ।
1 ईन्टरफेस बारे जान्दै।
2 अन्य विकल्पहरू।
3 अझ बढी?
ईन्टरफेस बारे जान्दै।
यो जोड्न राम्रो छ कि को इन्टरफेस सिपाप्टिक en linuxmint, भन्दा फरक छ Debian। केहि कारणका लागि linuxmintबटन समावेश छैन सबै अद्यावधिकहरू जाँच गर्नुहोस्। तर इन्टरफेसमा फर्कौं।
माथि हामीसँग छ मेनू पट्टी जसको हामी पछि केहि विकल्पहरू देख्नेछौं। केहि अगाडि तल, निम्न बटनहरू:
रिचार्ज: प्याकेज सूची अपडेट गर्नुहोस्।
निवेदन गर्नु: जब हामी स्थापना वा स्थापना रद्द गर्न प्याकेज मार्क गर्दछौं, हामी परिवर्तन लागू गर्न यो बटन प्रयोग गर्दछौं।
गुणहरू: यसले प्याकेजको विशेषताहरू, यसको वर्णन र निर्भरता देखाउँदछ।
खोज्नुहोस्: निश्चित प्यारामिटरको आधारमा प्याकेजहरूको लागि खोजी गर्न यसले धेरै विकल्पहरूको साथ संवाद प्रदर्शन गर्दछ।
तल हामीसँग दुईवटा स्तम्भहरू विभाजन गरिएको छ। बायाँमा हामी चयनित सेक्सन अनुसार विकल्पहरू छन्। बटन सेक्सन कल गर्नुहोस्: सेक्सन, स्थिति, उत्पत्ति, फिल्टर र खोज परिणामहरू.
सेक्सनहरू: कोटीहरू द्वारा आयोजित प्याकेजहरू देखाउँदछ। यदि हामी सम्बन्धित प्याकेजको लागि खोजी गर्न चाहन्छौं जिनोम डेस्कटप वातावरणउदाहरण को लागी हामीले केवल सेक्सन मा जानु पर्छ जिनोम.
राज्य: यस सेक्सनमा हामी फेला पार्नेछौं जुन अपग्रेड गर्न योग्य, अप्रचलित, स्थापित वा अवशिष्ट प्याकेजहरू हुन्।
उत्पत्ति: प्याकेजको उत्पत्ति (भण्डारहरू) देखाउँदछ। अर्को शब्दहरूमा, तिनीहरू कहाँबाट आउँदछन्।
फिल्टरहरू: यस सेक्सनमा तपाई विभिन्न प्रकारका जानकारी प्राप्त गर्न केहि फिल्टरहरू लागू गर्न सक्नुहुनेछ। यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि भाँचिएको प्याकेजहरू यहाँ देखा पर्दछ।
खोज परिणामहरू: निश्चित रूपमा के गर्छ यो यसको नामले संकेत गरे जस्तै यसले खोजी परिणामहरू प्रदर्शन गर्दछ सिपाप्टिक.
अर्को तर्फ हामीसँग प्याकेजहरूको सूची छ जुन हामी सिन्याप्टिक मार्फत स्थापना गर्न सक्छौं। यदि हामी ती मध्ये कुनै पनि छान्नुहोस् र दायाँ क्लिक गर्नुहोस्, हामी केहि विकल्पहरू छनौट गर्न सक्दछौं जस्तो कि:
अनचेक: प्याकेज अनचेक गर्नुहोस् यदि हामीले पहिले यो चयन गरिसकेका छौं।
स्थापना गर्न जाँच गर्नुहोस्: स्थापना गर्न प्याकेज जाँच गर्नुहोस्।
पुन: स्थापना गर्न मार्क गर्नुहोस्: ठिक छ, प्याकेजलाई सेलेक्ट गरेर रिस्टल गर्नुहोस्।
अद्यावधिक गर्न मार्क गर्नुहोस्: यदि प्याकेजसँग अपडेट छ, हामी यसलाई यो विकल्पको साथ चयन गर्दछौं।
मेट्न मार्क गर्नुहोस्: केवल चयनित प्याकेज मेट्नुहोस्।
पूर्ण रूपमा हटाउन जाँच गर्नुहोस्: यसको सिफारिश निर्भरताहरूको साथ चयनित प्याकेज हटाउनुहोस्। सुझाव निर्भरता अवशिष्ट कन्फिगरेसनमा जान्छ।
Propiedades: माथिको बटन जस्तो गर्दछ।
चिन्ह लगाउनुहोस् स्थापनाको लागि: स्थापना गर्न प्याकेजको सिफारिश निर्भरताहरू छान्नुहोस्।
चिन्ह लगाउनुहोस् स्थापनाको लागि: स्थापना गर्न प्याकेजको सुझाव निर्भरताहरू छान्नुहोस्।
यो जानेर हामी पहिले नै काम गर्न सक्दछौं सिपाप्टिक, तर हामी अन्य चीजहरू गर्न सक्दछौं, उदाहरण को लागी भण्डारहरूको स्रोत परिवर्तन गर्नुहोस्। केहि उपयोगी छ यदि हामी मिररहरू प्रयोग गर्छौं धीमा वा तल। यसका लागि हामी गर्नेछौं कन्फिगरेसन »भण्डार.
विकल्पहरू विन्डोमा जुन हामी पाउँछौं, हामीलाई केवल हाम्रो भण्डारहरू प्रबन्ध गर्न सक्षम हुन tab ट्याबहरू थाहा हुनुपर्दछ। पहिलोमा, हामी शाखाहरू पाउँछौं जुन हामी प्रयोग गर्छौं linuxmint (मुख्य, अपस्ट्रीम, आयात, ब्याकपोर्ट र रोमियो)। केवल फाइल जाँच / अनचेक गर्दै फाइल सम्पादन गर्दछ /etc/apt/sources.list.
दोस्रो ट्याबमा हामी रिपोजिटरीहरू समावेश गर्दछौं जुन छैन टंकशाला, त्यो हो तेस्रो पार्टी प्याकेजहरू को रूपमा Debian, the PPA de Ubuntu वा कुनै पनि स्रोतसँग उपयुक्त छ LMDE.
र तेस्रो ट्याबमा, हामी स्वचालित अपडेटहरू सक्रिय गर्न सक्दछौं र प्रत्येक पटक हामी तिनीहरूलाई चालू गर्न चाहन्छौं।
यदि तपाईंलाई यसको आवश्यक छ भने, सिपाप्टिक पनि सेट गर्नु पर्छ नेटवर्क प्रोक्सी र वितरण जुन हामी पूर्वनिर्धारित रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छौं। यसका लागि हामी गर्नेछौं सेटिंग्स ferences प्राथमिकताहरू.
को बारे मा एक सानो व्याख्या गर्न वितरणयदि हामी फाईलमा हेर्छौं भने /etc/apt/sources.list, हामीसँग प्रयोग गर्न दुईवटा रूपरेखा छन् (र the्गिएको पाठ नोट गर्नुहोस्):
डेब http://packages.linuxmint.com/ debian मुख्य अपस्ट्रीम आयात
डेब http://ftp.debian.org/debian परीक्षण मुख्य योगदान गैर रहित
डेब http://security.debian.org/ परीक्षण/ अपडेट मुख्य योगदान गैर रहित
डेब http://www.debian-mલ્ટmedia.org परीक्षण मुख्य गैर-मुक्त
पूर्वनिर्धारित, सिपाप्टिक सँधै उच्चतम वितरण लिन्छ, यसको मतलब यदि प्याकेट प्रवेश गर्दछ भने पिडिन २.2.8 को रिपोमा टकसाल (debian) र संस्करण २.१२.१2.9 डेबियन (परीक्षण), कार्यक्रमले हामीलाई संस्करण २.2.9 स्थापना गर्न सुझाव दिनेछ।
अवश्य पनि, यो परिवर्तन गर्न सकिन्छ यदि हामी मैन्युअल्ली वितरण छनौट गर्दछौं जुन विकल्प प्रयोग गरेर हामी प्रयोग गर्न चाहन्छौं। को संस्करणहरू प्राथमिकता दिनुहोस्:
र राम्रो, यदि हामी प्रोक्सी प्रयोग गर्दछ HTTP मार्फत जडान गर्न को लागी, हामीसँग यसलाई म्यानुअली सेट गर्न विकल्प पनि छ।
हाम्रो प्याकेजहरू प्रबन्धन गर्न अद्यावधिक र तिनीहरूलाई स्थापना गर्न अन्य उपकरणहरू छन्। Ubuntu उदाहरण को लागी अब तपाइँको समावेश गर्दछ सफ्टवेयर केन्द्रर LMDE धेरै समान मिल्दोजुल्दो छ, तर निश्चित तरिकामा सिपाप्टिक यो अधिक पूर्ण छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » aPLICACIONES » LMDE मा Synaptic भेटौं
धेरै धेरै धन्यबाद, सत्य यो हो कि मैले भर्खरै लिनक्सबाट सुरू गरिरहेको छु र यो उपकरण महत्त्वपूर्ण छ। उसलाई राम्रोसँग चिन्ने राम्रो छ
मलाई यो जान्न आवश्यक छ कि लिनक्स मिन्ट १ Qu कियानालाई आधिकारिक साइटबाट रेपो अपडेट गर्न प्रयास गर्नबाट कसरी जोगाउने हो
र मेरो स्रोतहरूमा समावेश छ। उब्न्टु १.14.04.०XNUMX मा पहिले नै परीक्षण गरीएको र नयाँ मिल्दोसँग मिल्दो नयाँ अद्यावधिक ठेगाना सूचीबद्ध गर्नुहोस् तर जब (अप्ट-अपडेट अपडेट) निम्न देखाइन्छ:
त्रुटि http://ubuntu.mes.edu.cu विश्वसनीय प्रस्तावित InRe कृपया
त्रुटि http://packages.linuxmint.com कियाना InRe कृपया
त्रुटि http://archive.ubuntu.com विश्वसनीय InRe कृपया
त्रुटि http://archive.ubuntu.com विश्वसनीय अद्यावधिकहरू InRelease
त्रुटि http://security.ubuntu.com विश्वसनीय सुरक्षा InRe कृपया
त्रुटि http://ubuntu.mes.edu.cu विश्वसनीय सुरक्षा InRe कृपया
त्रुटि http://ubuntu.mes.edu.cu विश्वसनीय अद्यावधिकहरू InRelease
त्रुटि http://ubuntu.mes.edu.cu विश्वसनीय InRe कृपया
त्रुटि http://archive.ubuntu.com विश्वसनीय रिलीज.gpg
"Archive.ubuntu.com" समाधान गर्न सकेन
त्रुटि http://security.ubuntu.com विश्वसनीय सुरक्षा रिलिगेस। pp
"सुरक्षा.ubuntu.com" समाधान गर्न सकेन
त्रुटि http://ubuntu.mes.edu.cu विश्वसनीय-प्रस्तावित रिलिज.gpg
"Ubuntu.mes.edu.cu" समाधान गर्न सकेन
त्रुटि http://packages.linuxmint.com कियाना रिलीज.gpg
"Package.linuxmint.com" समाधान गर्न सकेन
त्रुटि http://ubuntu.mes.edu.cu विश्वसनीय सुरक्षा रिलिगेस। pp
त्रुटि http://ubuntu.mes.edu.cu विश्वसनीय अपडेट अपडेट.gpg
त्रुटि http://archive.ubuntu.com विश्वसनीय अपडेट अपडेट.gpg
त्रुटि http://ubuntu.mes.edu.cu विश्वसनीय रिलीज.gpg
त्रुटि http://extra.linuxmint.com कियाना InRe कृपया
त्रुटि http://extra.linuxmint.com कियाना रिलीज.gpg
"Extra.linuxmint.com" समाधान गर्न सकेन
त्रुटि http://archive.canonical.com विश्वसनीय InRe कृपया
त्रुटि http://archive.canonical.com विश्वसनीय रिलीज.gpg
"Archive.canonical.com" समाधान गर्न सकेन
W: प्राप्त गर्न असमर्थ http://ubuntu.mes.edu.cu/UBUNTU/ubuntu/dists/trusty-proposed/InRelease
W: प्राप्त गर्न असमर्थ http://ubuntu.mes.edu.cu/UBUNTU/ubuntu/dists/trusty-security/InRelease
W: प्राप्त गर्न असमर्थ http://ubuntu.mes.edu.cu/UBUNTU/ubuntu/dists/trusty-updates/InRelease
W: प्राप्त गर्न असमर्थ http://ubuntu.mes.edu.cu/UBUNTU/ubuntu/dists/trusty/InRelease
W: प्राप्त गर्न असमर्थ http://packages.linuxmint.com/dists/qiana/InRelease
W: प्राप्त गर्न असमर्थ http://extra.linuxmint.com/dists/qiana/InRelease
W: प्राप्त गर्न असमर्थ http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty/InRelease
W: प्राप्त गर्न असमर्थ http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty-updates/InRelease
W: प्राप्त गर्न असमर्थ http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty-security/InRelease
W: प्राप्त गर्न असमर्थ http://archive.canonical.com/ubuntu/dists/trusty/InRelease
W: प्राप्त गर्न असमर्थ http://ubuntu.mes.edu.cu/UBUNTU/ubuntu/dists/trusty-proposed/Release.gpg "Ubuntu.mes.edu.cu" समाधान गर्न सकेन
W: प्राप्त गर्न असमर्थ http://packages.linuxmint.com/dists/qiana/Release.gpg "Package.linuxmint.com" समाधान गर्न सकेन
W: प्राप्त गर्न असमर्थ http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty/Release.gpg "Archive.ubuntu.com" समाधान गर्न सकेन
W: प्राप्त गर्न असमर्थ http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty-updates/Release.gpg "Archive.ubuntu.com" समाधान गर्न सकेन
W: प्राप्त गर्न असमर्थ http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty-security/Release.gpg "सुरक्षा.ubuntu.com" समाधान गर्न सकेन
W: प्राप्त गर्न असमर्थ http://ubuntu.mes.edu.cu/UBUNTU/ubuntu/dists/trusty-security/Release.gpg "Ubuntu.mes.edu.cu" समाधान गर्न सकेन
W: प्राप्त गर्न असमर्थ http://ubuntu.mes.edu.cu/UBUNTU/ubuntu/dists/trusty-updates/Release.gpg "Ubuntu.mes.edu.cu" समाधान गर्न सकेन
W: प्राप्त गर्न असमर्थ http://ubuntu.mes.edu.cu/UBUNTU/ubuntu/dists/trusty/Release.gpg "Ubuntu.mes.edu.cu" समाधान गर्न सकेन
W: प्राप्त गर्न असमर्थ http://extra.linuxmint.com/dists/qiana/Release.gpg "Extra.linuxmint.com" समाधान गर्न सकेन
W: प्राप्त गर्न असमर्थ http://archive.canonical.com/ubuntu/dists/trusty/Release.gpg "Archive.canonical.com" समाधान गर्न सकेन
W: केहि अनुक्रमणिका फाईलहरू डाउनलोड गर्न असफल भयो। तिनीहरूलाई बेवास्ता गरियो, वा पुरानोलाई यसको सट्टामा प्रयोग गरियो।
ई: लक गर्न सकेन / var / lib / dpkg / लक - खुला (11: संसाधन अस्थायी रूपमा अनुपलब्ध)
ई: प्रशासक डाइरेक्टरी (/ var / lib / dpkg /) लक गर्न सकिएन, हुनसक्छ अरू कुनै प्रक्रियाले यसलाई प्रयोग गरिरहेको छ?
*************** यो समस्या कसरी समाधान गर्ने? **************************
म बिन्ती गर्दछु कि कृपया मलाई मद्दत गर्नुहोस्
क्लारालाई जवाफ दिनुहोस्
फायरफक्स मेमोरी खपतको समाधान?
ब्लगर र पिकासा मा परिवर्तन